Sidee Loogu Soo Dejistaa Muusikada Youtube Ilaa Pc? ➡️ Raacayaasha ▷ ➡️
Sidee loogala soo degaa muusig Youtube-ka kombuyuutarkeyga?
Waxaa laga yaabaa 5, 2021 0 comments 409
Maanta waxaan ku bari doonaa mid ka mid ah hababka ugu wax ku oolka ah uguna fudud ee muusikada looga soo degsado YouTube-ka kumbuyuutarkayaga. Runtu waxay tahay inay jiraan codsiyo badan, barnaamijyo iyo bogag kuu oggolaanaya inaad ka soo saarto raadadka maqalka fiidiyowyada ku keydsan barxaddan caanka ah.
Hadda waa macquul hel codka maqal kasta oo la soo geliyay Youtube. Isticmaalayaashu waxay ikhtiyaar u leeyihiin inay faylka kala soo baxaan aaladda ay doortaan, xitaa ku keydso kumbuyuutarradooda. Haddii aad rabto inaad barato sida loogala soo degsado muusikada YouTube-ka kombuyutarkaaga, waxaan kugu martiqaadeynaa inaad aqriso qodobka soo socda.
Qalabka si toos ah ugala soo degso muusikada YouTube-ka kombuyuutarka
Shabakadda waxaa ka buuxa qalab kuu oggolaanaya inaad kala soo baxdo codka fiidiyow kasta oo lagu dhejiyo barxadda YouTube-ka. Markan waxaan dooneynaa inaan kula talinno mid gaar ah, fekerkeenna midka ugu fudud uguna raaxada badan in la sameeyo noocan oo kale ah.
Waxaan ka hadlaynaa keydtomp3.cc, bog aad ugu beddeli karto wax kasta oo YouTube-ka ah fiidyow maqal ah oo aad ku kaydin karto kombuyuutarkaaga. Marka waxaad fursad u heli doontaa inaad dhageysato markasta oo aad rabto adigoon u baahnayn internet.
Wax qarsoon cidna uma aha in YouTube-ka uu ku duqeeyo adeegsadayaasha tiro xayeysiis ah, mararka qaarkoodna daawashada waxyaabaha ku jira barxadani waxay noqoneysaa madax xanuun. Laakiin waxaa jira xalka dhibaatooyinkaas oo dhan: Faylasha si toos ah ugu soo dejiso kombuyuutarradeena
Talaabooyinka laga soo dejisto muusikada Youtube-ka ee kombuyuutarka
Beddelka khadka tooska ah ee loo yaqaan 'savetomp3.cc' wuxuu hadda ka mid yahay kuwa ugu booqashada badan isticmaalayaasha doonaya inay soo dejiyaan muusikada laga heli karo Youtube. Boggu wuxuu bixiyaa si fudud oo fudud oo la fahmi karo interface qof walbana wuu ku heli karaa bilaash.
Tallaabooyin yar ayaad awoodi doontaa inaad ku guuleysato ka dheji codka fiidiyow kasta oo aad ka heshay Youtube oo ku lifaaq maktabadaada muusikada. Waxaad fursad u heli doontaa inaad kala soo baxdo waxyaabaha aad rabto adiga oo aan gebi ahaanba waxba ka bixin.
Talaabada 1: Dooro fiidiyowga aad rabto inaad beddesho
Waxa ugu horreeya ee ay tahay inaad sameyso ayaa ah hel fiidiyowga aad rabto inaad ka soo saarto codka. Si tan loo sameeyo, waa inaad gashaa bogga rasmiga ah ee YouTube. Barta raadinta waxaad ku qortaa magaca heesta aad rabto inaad soo dejiso oo aad ka doorato.
Talaabada 2: Beddelaan video in audio
Xilliga ugu muhiimsan ee dhammaan la soo gaadho waa waana u badalo fiidiyowga aan u dooranay raad maqal ah. Waxaan ku samayn doonaa iyadoo la kaashanayo savetomp3.cc, mid ka mid ah qalabka ugu wanaagsan ee loogu beddelo Youtube-ka fiidiyowyada heesaha.
Fur biraawsarka doorbidkaaga oo ku dhaji URL-ka soo socda: https://savetomp3.cc/es/
Sanduuqa ku jira "Magaca Youtube ama URL"Waa inaad dhajisaa iskuxirka fiidiyowga YouTube-ka ee aad rabto inaad u beddesho maqal oo guji" Raadi "
Daaqad cusub ayaa soo muuqan doonta taas oo aad ikhtiyaar u leedahay kala soo bax video-ga MP4 ama MP3. Xaaladdan oo kale waa inaad doorataa MP3
Guji "downloadOo dooro galka meesha aad rabto inaad ku kaydiso feylka. Waxaa badanaa lagu kaydiyaa galka "soo degsashada" kombuyutarkaaga.
1 Qalabka si toos ah ugala soo degso muusikada YouTube-ka kombuyuutarka
2 Talaabooyinka laga soo dejisto muusikada Youtube-ka ee kombuyuutarka
2.1 Talaabada 1: Dooro fiidiyowga aad rabto inaad beddesho
2.2 Talaabada 2: Beddelaan video in audio
Waxaan rabaa inaan si toos ah uga baahiyo barta 'Twitch', sideen ku sameeyaa?
Sidee looga socdaa aasaasiga 'Twitch' ee loo yaqaan 'Twitch Prime'?